Tartan iyo Taclin: Cumar Samatar Galkacayo iyo Dangronyo Secondary oo xalay guulaystay. – Radio Daljir
Luulyo 28, 2013 4:45 b 0
Boosaso, July 28, 2013 – Tartan iyo Tacliin oo ay ku jira wareegiisa labaad ayaa xalay la tartamay mid ka mid ah tartamadii ugu adkaa ee soo mara inta barnaamijka uu socday, waxaana tartan xiiso leh qaybta koowaad uu ku dhexmaray dugsiga Cumar Samatar Gaalkacyo iyo Sheekh Cismaan Qardho.
Labada dugsi ayaa tartan xiiso badan soo bandhigay hase yeeshee horaa loo yiri gari laba nin kama qosliso waxaa ay kusoo dhamaatay Cumar Samatar oo 12 darajo ah iyo Sheekh Cismaan Qardho 10darajo keenay, taasi oo ka dhigan dugsiga Cumar Samatar inuu guulaystay una soo gudbay wareega sadexaad.
Dugsiyada kale ee xalay tartamay ayaa ka ahaa Sheekh C/laahi Ibraahim Ufayn iyo Dangoroyo School oo labadooduba kala raacsan gobolada Bari iyo Nugaal, tartanka ayaa kadib waxaa guusha la hoyday dugsiga Dangoroyo 11- daro la yimid , halka dugsiga C/laahi Ibraahim sideed darajo.
Caawa ayaa waxaa wareega labaad ku tartamaya ee ugu dambeeya dugsiga Xamdaan Bosaaso iyo Mumtada Burtinle, sidoo kale waxaa caawa iyana tartami doona Manara Bosaaso iyo Mubaarak dhahar.